Ciidan ka tirsan Milatariga Somalia oo Isbaaro dhigtay Suuqa D/Kaaraan? | War La Helaa Talo La Helaa
Home WARARKA MAANTA Ciidan ka tirsan Milatariga Somalia oo Isbaaro dhigtay Suuqa D/Kaaraan?
Ciidan ka tirsan Milatariga Somalia oo Isbaaro dhigtay Suuqa D/Kaaraan?
Qaar ka mid ah Ganacsatada Suuqa Degmada Kaaraan oo la soo Xariiray Warbaahinta ayaa cabasho ka muujiyay rag ku libisan dariiska Ciidanka Milatariga Soomaaliya kuwaas oo maalmihii la soo dhaafay Isbaaro dhigtay Bartamaha Suuqa Kaaraan ee Gobalka Banaadir .
Ciidankaan ayaa la sheegay in ay lacago Sharci daro ah ka qaadaan Dadka iyo Gaadiidka Ganacsiga ku leh Suuqaasi Islamarkaana lagu wargiliyay Maamulka degmada Kaaraan iyo Saraakiisha Amniga ee degmadaasi ilaa hadana aysan waxbo ka qaban Cabashadooda.
Dhinaca Kale Mid ka mid Taliyaasha amniga degmada Kaaraan oo ay la hadashay Warbaahinta ayaa Xaqiijiyay in ay Jiraan 3 ka mid ah Ciidanka Milatariga Soomaaliya oo afartii maalmood ee la soo dhaafay Isbaaro Qarsoodi ah dhiganayay degmadaasi gaar ahaan Suuqa markii lala hadlayna ay diideen.
“Waan la hadalnay Ciidankaan waana diideen waa rag dagaal diyaar u ah halka ay joogaana waa meel aan lagu dagaalami karin waana suuqa dhaxdiisa oo ay shacab buuxaan waxaana wadnaa xal kale oo dagaal la’aan ah in ay ku xalino” ayuu yiri Sarkaalkii aan la hadalnay ee degmada kaaraan.
Sidoo kale Taliyaha ayaa Sheegay in arintaan loo gudbiyay Saraakiisha Kale ee Dowladda iyo Wasaaradda amniga waxna laga qaban doono maalmaha soo socda.
“Markii aan shacabka la hadalno oo aan suuqa shaqada ka joojino si aan usoo qabano waa ay baaqdaan waxaana wadnaa sidii aan ku heli laheyn taliska ay ka tirsan yihiin si dagaal looga baaqsado arintana loo xaliyo” ayuu mar kale yiri Mas’uulka aan la hadalnay.
Ciidanka Isbaarada dhigtay suuqa ayaa la sheegay in aysan mar walba joogin oo ay saacado kooban si qarsoodi ah ku soo galaan kadibna ay shacabka dhibaateeyaan waxaana rasaas ay maalmo ka hor ay ku fureen Gaari Shacab saarnaa ku dhaawacmay qof rayid ah.